FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA TEXAS HEELER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Texas Heeler
Alika omby ostraliana / alika mpiandry aostraliana alika mifangaro
Blue the Texas Heeler (alika mpiompy alika ostraliana / alika mpiandry sakaosy aostraliana) dia Texas Heeler miasa ary mpiandry tena tsara!
Ny Texas Heeler dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Alika omby ostraliana ary ny Alika mpiandry aostralianina . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Fanamarihana: ny Australian Cattle Dog dia antsoina koa hoe Australian Heeler, Hall's Heeler, Queensland Heeler, Blue Heeler, Red Heeler, Australian Cattledog ary Australischer Treibhund.
'Ity i Miloh amin'ny 1.5 taona. Nentiko avy tao amin'ny fianakaviana iray nifindra tany amin'ny trano iray izay tsy namela ny biby fiompy izy ireo ka voatery ario izy . Izy dia karazana hybrid Texas Heeler. mahatoky amin'ny lesoka ary tia omby . Manana isika akoho ary misakafo eo anilan'izy ireo izy. Tsy mbola naneho mariky ny herisetra izy alika hafa na olombelona hitako. Izy no manana ny betsaka toetra tia namana amin'ny alika rehetra nananako. Mpankafy tanteraka izy ary mankafy ny fiarahan'ny olona ampahafantariko azy. Indraindray ny Alika omby ostraliana ao aminy no mivoaka ary lasa mahatohitra kely izy, nefa mihaino foana izy amin'ny farany. Tena tsapako fa miezaka izy mampifaly ahy. Izy no namako akaiky indrindra ary reharehako ny fananako azy ho anisan'ny fianakaviako. '
'Sam dia Texas Heeler — hazo fijaliana eo anelanelan'ny Mpiandry Aostraliana sy Blue Heeler. Ny ray aman-dreniny dia samy voasoratra anarana ary avy amin'ny alika WGC Field Trial. Sam no alika tantsaha mahay indrindra nahitako ny fahafinaretana niara-niasa tamin'ny heeler voajanahary niaraka tamin'ny fiara mafy fa ny faharanitan-tsaina sy ny toetran'ny Mpiandry Aostraliana. 60 pounds izy, voajanahary amin'ny fankatoavana sy ny hakingana ary ny fiompiana / fikolokoloana. Nofonosiny ny osy mpifanolo-bodirindrina aminy ary nalefany tao ambanin'ny fefy teny ambonin'ny renirano izay nivoahan'izy ireo samirery avy eo niverina tany an-trano izy taorian'ny nahavita ny asany. Ny akoho amam-borona ( akoho , vorontsiloza , guineas sy 1 Swan ) maimaimpoana maimaimpoana rehefa miambina i Sam. Mamono olona tsy tapaka izy posum , skunks SY raccoons satroka sahy manelingelina ny ondriny, nefa ny vorona mihinana ny sakafon'alika miaraka aminy mijoro eo ambonin'izy ireo. Nentina coyote aza izy ary na dia tsy nahavita ny coyote aza izy dia tsy niverina intsony. Ho fanampin'izay, Sam dia miatrika lalao fakana na milalao ankizy foana. Amin'ny maha alika fambolena azy dia niavaka tamin'ny faritra rehetra teto izy. '
Sam dia Heeler Texas, hazo fijaliana eo anelanelan'ny Mpiandry Aostraliana sy Blue Heeler.
'Ity i Gracie, 5 taona rehefa naka ity sary ity izahay. Fantatray fa fifangaroan'n'omby mpiompy ostraliana iray izy, saingy tsy fantatray fa misy anarana ireo! Natsipy avy tao anaty kamio tao anaty sakaosy tao anaty arabe feno olona izy sy ireo mpiara-monina aminy talohan'ny nananan'izy ireo nify tsy fantatsika hoe maninona. Nisy namako iray nanatri-maso ity hetsika ity ary namonjy an'i Gracie hojereko satria manga manga toy ny alika tiana tamin'ny taloha aho. Tsy maintsy mpiady izy satria teo am-pototry ny antontan-kitapo tao anaty sakaosy ary vaky rantsan-tongotra. Manantena izahay fa ho mpiandry ondry Aussie izy, saingy rehefa nijerijery azy ilay mpanazatra alika dia nampandrenesina izahay fa alika omby io na fifangaroan'ny alika mpiompy ary mila herisetra mafy hatramin'ny fahazazany. Torohevitra nalaina! Gracie dia tena nanjakazaka ary niady tamiko ho an'ny mpitarika fonosana fanendrena hatramin'ny voalohany. Tsy fantatro raha mbola velona aza izy izao raha tsy ho an'i Cesar Millan sy ireo fitsipika nianarantsika tamin'ny fijerena azy. Izaho sy ny vadiko dia tsy taiza na taiza na taiza vonona handraisana alika mahery setra iray noho ny fankasitrahanay manokana ny mpampiofana anay alika mpiandry ary fantany izay nataony.
'Gracie dia marani-tsaina mahatsiravina ary mahalala teny 200 farafaharatsiny, ao anatin'izany ny kilalao isan-karazany ao anaty boaty kilalao sy ny anaran'ny tsirairay aminay saka . Noho ny faharanitan-tsainy dia niavaka tamin'ny kilasy fankatoavana izy, saingy nandà tsy hanao fikafika izy na inona na inona karazana valisoa natolotra azy dia toy ny hoe fantany fa tsy misy dikany izany. Aleony irery ny alika tokana dia mijanona any ivelany mandritra ny andro ary miditra amin'ny alina mandany fotoana miaraka aminay ary matory ao anaty vatany. Tsy mpisikidy izy na tena mahasalama, fa mankafy fikosohan-kibo tsara sy rangotra lamosina matetika. Izy dia mpiandry mahagaga , fa saka fotsiny no entiny. Isaky ny alina dia hivoaka any an-tokotany izahay ary hampody ny jiro jiro, ary toy ny adala ny fandokafantsika ny alokay! Sarotra ny manome azy fanatanjahan-tena betsaka araka izay ilainy, mazava ho azy. Tiany mandeha manodidina ny manodidina ary mitsangatsangana miaraka aminay.
'Ankehitriny rehefa antitra izy, dia tokony holazaiko fa gal mandanjalanja izy ary somary milamina kokoa raha mbola misy zavatra hatao. Taolam-biby Dingo lehibe no itondrany ny sakafony ankafiziny — mbola tsy hitako a chewer toa azy! Manaraka ny baiko eo noho eo izy, saingy hizaha toetra ahy isan'andro izy amin'ny fotoana tsy ampoiziko fa 'manadino' zavatra iray aho. Eo imasom-bahoaka dia mijery akaiky azy aho noho ny habeny sy ny tanjany (50 pounds) fa tsara fitondran-tena foana izy.
'Ny fanampiana ny famonjena an'i Gracie sy ny fananana azy ho mpikambana ao amin'ny fianakavianay dia mety ho iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra vitako, nefa koa iray amin'ireo fanomezana valisoa indrindra. Tsy hanadino azy mihitsy isika. '
'Sydney dia Texas Heeler, na lakroa eo anelanelan'ny Alika omby ostraliana ary an Mpiandry Aostraliana . Navoaka tao amin'ny toeram-pialofana biby teny an-toerana izy rehefa nilaozana toy ny alika kely. Vao feno herintaona izy tamin'ity sary ity ary mpikambana sarobidy amin'ny fianakavianay. '
Sydney the Texas Heeler (Australian Australian Shepherd / Australian Blue Heeler mix) amin'ny 2½ taona— 'Tokony ho 30-35 lb. izy ary eo ambanin'ny 20 santimetatra eo an-tsoroka. Nentiko niaraka tamin'ny 'zazany' ity sariny ity. Kilalao ankafiziny indrindra no entiny miaraka aminy na aiza na aiza. Alika tena mahira-tsaina, tsy mivadika ary be fitiavana i Sydney. '
Matilda the Texas Heeler amin'ny 2 taona (raim-pianakaviana mpiandry ondry aostralianina dia alika mpiompy aostralianina)
Mitzvah the Texas Heeler (mifangaro eo anelanelan'ny biby fiompy aostralianina sy ny mpiandry ondry aostraliana) - 'Izy no alika tsara indrindra nananako. Ny fitondran-tena sy ny fomban'alika omby aostralianina mafy loha sy be herim-po, vonona ny hampifaly, dia milalao milay, somary manjakazaka (eo alohan'ilay alika iray hafa, izay Basenji lahy), saingy tena mamy sy be fitiavana. '
Alika kely hybrid Davy the Texas Heeler amin'ny 2 volana ½— 'Ity i Davy Crockett McFerren (miaraka amin'ny anarana toa azy, betsaka ny zavatra azony iainana). Davy dia Blue Heeler (Alika omby ostraliana) / Mpiandry Aostraliana mifangaro. Nentiko avy tany amin'ny trano fitaizana be antitra akaikin'ny toerana ipetrahako eto Texas. Tena mamy tokoa izy, saingy mipoitra indraindray ny toetrany Alika Biby Aostralianina ary mirona hiahiahy amin'ny olon-tsy fantatra izy, ary indraindray somary mitsambikina. Saingy rehefa milamina izy ary mifankahalala amin'izy ireo dia mpiara-milalao mahafinaritra - na mpiambina. Tena marani-tsaina izy (hendry loatra, indraindray!) Ary mianatra haingana. Manana fotoana maditra izy indraindray. Avy eo dia antsoinay hoe 'Davy Jones.' Ny vatany kely dia nomenay anaram-bosotra hoe 'Davy Jones' Locker. ' Rehefa tonga ny fotoana hatory kely ao dia miteny isika hoe, 'Ho an'i Davy Jones' Locker miaraka aminareo! ' Tian'i Davy ny milalao lalao ary mihazakazaka toy ny maniac manodidina ny tokontany. Tiany ny milalao irery amin'ny kilalaony ihany koa ... manipy azy ireo eny amin'ny habakabaka avy eo mihazakazaka manaraka azy ireo, mikapoka azy ireo ary mihozongozona mafy araka izay tratry ny heriny. Tena sary an-tsaina izany. Ny sasany amin'ireo anaram-bosotra nomeny dia ny 'Blue', 'Laddie,' 'Slim,' na 'Slim Blue.' Tiany ny ety ivelany ary aleony any ivelan'ny ankamaroan'ny fotoana (na amin'ny orana aza.) '
I Davy the Texas Heeler dia mifangaro amina alika kely amin'ny 5 volana
'Ity i Ellie, mpiandry aostralianina ary mixer Heeler aostraliana ao anatin'ny 3 volana. Tena marani-tsaina izy, be feo ary mahery vaika indraindray. Tia mandry eo am-pofoako koa izy, manoroka sy mitaingina ny fiara. Afaka adala iray minitra izy ary mifantoka amin'ny minitra manaraka. Hitako ho alika be pitsiny izy, nefa manana ny tsara habetsahan'ny hetsika sy fanentanana alika mahatsiravina. Efa ho herintaona izao izy ary miomana amin'ny fanarahana fankatoavana sy hakingana. '
Ellie the Australian Shepherd / Australian Heeler mampifangaro alika kely amin'ny 3 volana (Texas Heeler)
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Texas Heeler
Texas Heeler Sary 1
Texas Heeler Sary 2
Texas Heeler Sary 3
Lisitry ny alika omby afrikanina mifangaro alika
border collie pomeranian mix amidy
bernese dog dog mastiff mifangaro
sarin'ny terriers pitbull amerikana
jack russell pomeranian afangaro alika kely
mixer anglisy spaniel golden retriever mix